हलिउड एक्टर टम ह्यान्ससँग स्किन सेयर गर्न मन छ - अन्तर्वार्ता - नारी
सुहाना थापा, नायिका
तपाईंका प्रशंसकले तपाईंका लागि गरेको कुनै सम्झनायोग्य कुरा ?
ए मेरो हजुर–३ मा साइन भएको थाहा पाएपछि जब म मिडियामा आउन थालें तब ज्योति नामका एक जना प्रशंसकले इन्स्टाग्राममा म्यासेज गरेर भेट्न मन लागेको कुरा बताउनुभयो । काम सुरु नगर्दै कसरी प्रशंसक हुनुभयो भन्दा तपाईंको तस्बिर देखेर भन्ने जवाफ आयो । म नेपाल आइसकेपछि उहाँ घरमै भेट्न आउनुभयो । तस्बिरका भरमा त्यति धेरै माया पाउँदा म दंग मात्र भइन त्यसबाट ठूलो प्रेरणासमेत मिल्यो ।
यदि कसैद्वारा विशाल हात्ती उपहार पाउनुभयो तर लुकाउने सर्तमा, कहाँ लुकाउनुहुन्छ ?
सेतो कि कालो ? (हाँसो )....ठूलो चीज लुकाउन धेरै गाह्रो हुन्छ तसर्थ हात्तीका लागि लुगा बनाएर फूलले सजाइदिन्थें ।
तपाईंलाई कोसँग स्किन सेयर इच्छा छ ?
हलिउड एक्टर टम ह्यान्ससँग ।
तपाईंको फेवरेट डेली वेयर ?
बेस्ट ड्रेस म्यानको उपाधि कसलाई दिन चाहनुहुन्छ ?
अनमोल केसीलाई ।
तपाईंलाई कसैले यो ब्रह्माण्डको कुनै पनि स्थानको ड्रिम होम गिफ्ट गर्न चाहन्छ भने तपाईं कुन ठाउँ रोज्नुहुन्छ ?
एभरेस्ट बेसक्याम्पको गोक्योरी ।
तपाईं नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दीबाहेक अरू कुनै भाषामा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
म फ्रेन्च भाषा पनि पढ्दैछु । बोनजो ज्योमा तार सुहाना थापा ।
त्यस्तो कुनै कुरा सुन्दा प्रशंसा जस्तो लाग्छ तर वास्तवमा होच्याइएको हुन्छ, के होला ?
मलाईं कुनै पनि व्यक्तिले तिम्रो यो राम्रो छ तर.....भनेपछि आफूलाई होच्याएको महसुस हुन्छ ।
यदि तपाईंलाई एउटा कचौरामा कुनै एक मिनेटवाला स्लट दृश्य सिर्जना गर्न भनियो भने उक्त कचौरामा के भर्नुहुन्छ ?
म पेपरमा गीताको ज्ञान लेख्थें अनि त्यही पेपरले कचौरा भर्थें ।
तपार्इंसँग भएको तर प्रयोगमा नआएको खुबी ?
म लेख्न सक्छु तर यो त्यति प्रयोगमा आएको छैन ।
ए मेरो हजुर–३ बाट पाएको उपलब्धि ?